Blockchain Izindaba 12 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Januwari 12, 2018 admin
IsiShayina injini Baidu oluqalisa platform Blockchain-njengoba-a-service
IsiShayina yosesho lwewebhu giant Baidu usethule siqu blockchain-njengoba-a-inkonzo yayo (uBaas) platform.
Ngokusekelwe ubuchwepheshe lakhiwa Baidu, yesikhulumi evulekile ubeka ukunikeza kakhulu “kuyasebenziseka” inkonzo blockchain.
Ngokwe-website le nkampani ozinikele, “Baidu Trust” ivumela Umqhubi futhi ukope ukuthengiselana, futhi singasetshenziswa ezimweni ezihlukahlukene ukusetshenziswa, kuhlanganise lwemali digital, sokukhokha digital, yasebhange ukuphathwa credit, ukuphathwa umshwalense kuhlaziywe zezimali, futhi nokuningi.
amafomu uhulumeni wase-US iqembu elisebenza igxile cryptocurrencies
US uNobhala Wezimali Steven Mnuchin ngoLwesihlanu ukuthi lwezezimali Ukuzinza Obhekela Council, umzimba uhulumeni ukuthi Uhlaziya uhlelo lwezimali izingozi, ubumbe iqembu ukusebenza igxile cryptocurrencies.
Mnuchin zaphawula inqubo ngesikhathi ukubonakala ngesikhathi i-Economic Club e-Washington, D.C. ngemva kokuba uJesu ebuzwa ngesibonakaliso isihloko bitcoin.
“Thina kakhulu igxile cryptocurrencies,” Mnuchin wachaza, ekhomba izingxoxo nabanye nabalawuli ngaphakathi U.S. uhulumeni futhi kamuva esishoyo: “Sifuna ukuqiniseka ukuthi Abantu ababi Ungasebenzisa lawa zezimali ukuba wenze izinto ezimbi.”
Mnuchin wanezela ukuthi indaba yayiphathelene nesikhathi lowo U.S. uhulumeni ukuthi bangazihlanganisa iqembu international G-20 kanye.
Mnuchin Wabuzwa ukuthi Federal Reserve kungenzeka ukuthuthukisa version ayo digital Fiat lwemali.
“I mina Fed ungacabangi kukhona isidingo ngalesi sikhathi,” Mnuchin wathi.
Sberbank waseRussia umemezela lab blockchain
Sberbank, omunye amabhange esikhulu kunazo zonke eRussia, umemezele laboratory blockchain ukuthuthukisa kanye test izixazululo blockchain ezisekelwe.
I lab entsha ihlose ukukhiqiza prototypes umkhiqizo, ukulihlola umshayeli futhi akusebenzise blockchain ezisekelwe izixazululo ebhizinisi Sberbank Group, owakhishwa abezindaba uthi.
Ngokusho Igor Bulantsev, Iphini likamengameli Sberbank sika eziphezulu, blockchain kungasiza “reshaping” emakethe ezezimali, kanye nemisebenti ebhange kanye nezinsizakalo.
Blockchain yogesi bill ehlongozwayo Tennessee
A edale e Tennessee onibekele umthethosivivinywa omusha ukuthi ibona amasignisha blockchain njengoba amarekhodi ezomthetho electronic, wokugubha zakamuva umzamo zomthetho ukwenza kanjalo emasontweni amuva.
Imalia okumele ikhokhwe, ungeniswe kumphatsi wesifundvo Tennessee House of Abamele wombuso edale Jason Powell ngomhla ka-Jan. 10, kwenanela izingcezu efanayo komthetho bafaka eFlorida bese Nebraska.
Kodwa njengoba ne imizamo eFlorida bese Nebraska, ke kusazobonakala ukuthi ezinye izishaya bazothini njengoba izinyathelo ukuhambisa ngenqubo mpikiswano.
Online yasebhange Swissquote anda ke sika inzuzo sinesimo sengqondo ngenxa Bitcoin Ukuhweba
Online yasebhange Swissquote elibuyekeziwe inzuzo yayo isimo 2017, kokuba bazuza ukuhweba oqinile cryptocurrencies. Le nkampani iye waqala ukugcwala ngesithakazelo ngoba bitcoin yokuhweba.
Indlala-based Swissquote ulindele Amaholo ukuthi bezingaphansi 186 abayizigidi ezingu-franc Swiss e 2018, 8 abangaphezu kwezigidi kwakuthiwe sezulu e umhlahlo yayo yakamuva kakhulu. Ibhange wathi ngeke uthumele inzuzo pretax ka mayelana 45 abayizigidi ezingu-franc, ngokusho kwesitatimende ezikhishwe namuhla.
Ukwanda kokutheleleka kudlange kakhulu izinzuzo inzuzo ukukhula kwakusuke kuwumphumela izici ezimbili, Swissquote wathi.
Amakhasimende adayiswa kakhulu ngaphezulu nge izibambiso and lokushintshisana angaphandle, ngenkathi inkampani futhi ayezuza ukwethulwa cryptocurrency zokuhweba.
Swissquote kwaba European yasebhange ye-inthanethi yokuqala ukuqalisa umnikelo onjalo ngoJulayi, 2017.
Japan DMM Iqembu uqala Bitcoin exchange
DMM Group, a Japan ezisekelwe eCommerce kanye eliyifa Inthanethi inkampani uqala exchange omusha obizwa ngokuthi DMM Bitcoin.
Inkampani ihlele umnikelo 24/7 nokwesekwa kwamakhasimende, futhi okwamanje entsha ezilungisiwe Bitcoin exchange Japan.
I eqinile is ngokomthetho njengenkolo 'virtual lwemali abadayisi’ ku-Japanese Finance Bureau
Thumela Previous:Bitcoin Hardforks kuyini?
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 13 Januwari 2018